Intsingiselo yenguqulo ye-gvSIG 2.0 entsha-iGeofumadas
Epreli, 2013 GvSIG, ezintsha
Ngolindelo olukhulu sibhengeza into ethe yaziswa ngumbutho we-gvSIG: ingxelo yokugqibela ye-gvSIG 2.0; Iprojekthi ebisebenza ngendlela ethe ngqo kuphuhliso lwe-1x kwaye kude kube ngoku isishiye sanelisekile kwi-1.12.
Phakathi iimpawu ezintsha, olu guqulelo ine sesakhiwo zophuhliso ezitsha, nto leyo eye ngokutsha indlela gvSIG ujongana imithombo yedatha ukwenzela ukuphucula zombini ukuthembeka kunye modularity, lonto izakunceda zombini abasebenzisi kunye nababhekisi phambili . Ukongezelela ukuvumela ukukhululeka kokugcinwa nokugcinwa kweteknoloji. Ngoko ke, utyalo elizayo ngenjongo hayi ngokunciphisa utshintsho lwezobuchwepheshe yaye kubekwe iziseko zazivelela ngokukhawuleza.
Le nguqulo entsha ye-GvSIG Desktop izisa kwakhona uluhlu lwezinto ezintsha:
-Isifaki esitsha esixhasa ukufakwa okuqhelekileyo kunye nokwezifiso; ngento enokwenzeka ukulawula oko sinethemba lokukufaka nokungahoyi; Isisiseko ngendlela yabasebenzisi abaphambili.
-Udibene-Ongeza Umphathi ekuvumela ukuba ufakele izandiso ezintsha kwaye wenze ngokwezifiso i-gvSIG yethu kwisicelo ngokwayo.
-Olo tshintsho kwindlela yokusebenza kwezixhobo zokulawulwa kwedatha ezinjenge:
· Ukungenisa / ukuthumela iifayile.
· Ukusebenza ngeetafile.
· Uluhlu olutsha.
-Ukuphuculwa kokulayisha kwentsebenzo.
-Nkxaso ye-WMTS (Inkonzo yeTayile yeWebhu).
-Indawo yokugcina idatha.
Umdibaniso we-geoprocessing odityanisiweyo.
-Uphawulelo lokungenisa elizweni, ukuqhubela phambili ukuveliswa kweelayibrari zeesimboli.
-Iphawu lokuthumela kwelinye ilizwe, likuvumela ukuba wabelane ngokulula neelayibrari epheleleyo yeesimboli nabanye abasebenzisi.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba ayisiyi-gvSIG 1.12 ephuculweyo; Njengoko benditshilo ngaphambili, yiprojekthi yexesha eliphakathi ebikade iphuhlisa ingxelo esaziyo ukuba iyakuthatha indawo yeenguqulelo ze1x. Ke nangona siyinguqulelo yamva nje ye-gvSIG, sijamelene ne-gvSIG entsha, ke sifumanisa ukuba ayinayo eminye imisebenzi ye-gvSIG 1.12. Ezi zinto zisebenzayo ziya kubandakanywa kuhlaziyo olulandelelanayo kunye oluqhubekayo njengoko zifudukela kulwakhiwo olutsha. Iimpawu eziphambili azifumaneki zezi:
Iintsomi ngeesimboli ezilinganayo, izidanga, ubuninzi beengongoma, ubungakanani ngokwendidi nangamazwi
-Izandiso: Uthungelwano nohlaziyo lwe-3D.
Ngendlela efanayo kukho iiprojekthi eziliqela ezisekelwe kulolu lwakhiwo olutsha oluya kuvumela imisebenzi emitsha kunye nophuculo ukuba luvele ngqo kwi-gvSIG 2.0 kwiinyanga ezizayo.
Kufuneka kwakhona sikhumbule ukuba inqanaba lozinzo lwale nguqulo intsha aliphezulu kangako njengoko ufuna -ngeli xesha-, ngokuqwalasela okokugqibela ukuze uluntu luqale ukulusebenzisa ngokusemthethweni kwaye, ngokukodwa, ukujongana nophuhliso olutsha kuwo.
Kukho konke sikhuthaza ukuba uzame kwaye ubike iimpazamo ozifumanayo ukuze sikwazi ukuzilungisa kwiimbuyekezo ezilandelelanayo. Iiphoso eziyaziwayo zale nguqulo zinokubonisana nakwiikhonkco ezikhankanywe ngezantsi.
Kule nguqulo, izibuko ezininzi ziye zanikwa amandla okukhuphela i-add-ons kwi-gvSIG. Ezi zibuko ziya kufumaneka kwiintsuku ezimbalwa.
Abantu abasemva kweli projekthi bathemba ukuba sithanda iimpawu ezintsha zale nguqulo entsha kwaye sinceda ukuphucula.
Kwelethu icala, sivuyisana nomzamo weli linge; ukuba emva kokungena kwimodeli entsha ngokuchasene neyesiko, ukoyisa imingxunya kugcine uqeqesho olunomdla kulawulo loluntu luphela oluthe lwaqhubeka nokuqhubeka nombono wokuqala. Siyayazi indlela entsonkothileyo imodeli yoMthombo ovulekileyo, kodwa kwimeko yam, kuyonwabisa ukufika kumasipala eMelika, kulungelelwaniso olungahoywanga lihlabathi liphela, nasemva kokubulisa ngobubele komgaqo, ukudibana nomphathi wobhaliso lomhlaba ubuganga bokuthi:
Apha sisebenzisa i-gvSIG. Ndiyiphumeze ngokwam.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Indlela yokuxhuma kwi-intanethi kwiindawo ezikude
Post Next Ukubandakanywa komba wentlalo kwiinkqubo zoqeqesho lobugcisaOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Ithetha ntoni le nguqulo intsha ye-gvSIG 2.0"
Ndiyabonga ngokubonakalisa iindaba kwiblogi yakho kunye nomhlathi wokugqibela obonisa esinye sezizathu zokuba sisenza ngokuphangaleleyo le projekthi.